ကိုယ်ပိုင်ရေးရာမူဝါဒ - HGH ဖူးခက်
Genotropin 36 IU သည် - ရုပ်ပုံများနှင့်အတူ activation ညွှန်ကြားချက်
အဘယျသို့တစ်ခါသုံးဆေးထိုးအပ် Genotropin 36 IU ကိုအသုံးပြု
ကိုယ့်ကိုယ်ကို HGH ဆေးထိုးအောင်ဘယ်လိုနေသလဲ?
ဆေးထိုး HGH များအတွက်အကောင်းဆုံးအချိန်နှင့်သောက်သုံးသော
အပိုင်း 1 - WE သင့်အချက်အလက်တွေနဲ့ဘာလုပ်ရမလဲ
သင်တို့သည်ငါတို့၏စတိုးကနေတစ်ခုခုဝယ်ယူတဲ့အခါ, ရောင်းဝယ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဖြစ်ကျနော်တို့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းသင်သည်ထိုကဲ့သို့သောသင့်အမည်, လိပ်စာနှင့်အီးမေးလ်လိပ်စာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုပေးပါ။
သင်တို့သည်ငါတို့၏စတိုးဆိုင် browse အခါ, ငါတို့သည်လည်းအလိုအလျှောက်ကျွန်တော်တို့ကိုသင့် browser နှင့် operating system အကြောင်းလေ့လာသင်ယူကူညီပေးသည်သတင်းအချက်အလက်နှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုပေးနိုင်ရန်အတွက်သင့်ကွန်ပျူတာ၏အင်တာနက်ပရိုတိုကော (IP) address ကိုလက်ခံရရှိသည်။
အီးမေးလ်ပို့ရန်စျေးကွက် (ရှိလျှင်): သင့်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်နှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့စတိုးဆိုင်အသစ်ထုတ်ကုန်များနှင့်အခြားမွမ်းမံမှုများနှင့် ပတ်သက်. သင်အီးမေးလ်များပေးပို့လိမ့်မည်။
အပိုင်း2- သဘောတူညီခကျြ
ကျွန်တော်တစ်ဦးအလယ်တန်းအကြောင်းပြချက်များအတွက်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသတင်းအချက်အလက်တောင်းခဲ့လျှင်, စျေးကွက်ကဲ့သို့ငါတို့သည်သင်တို့၏ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်ပြုချက်အဘို့ကိုတိုက်ရိုက်သင်မေးပါလိမ့်မယ်တစ်ခုခု, ဒါမှမဟုတ်သင်အဘယ်သူမျှမပြောဖို့အခွင့်အလမ်းနှင့်အတူပေး။
သငျသညျရွေးချယ်-in ကိုအပြီး, သင်သည်သင်၏စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေခဲ့လျှင်ကျွန်တော်တို့ကိုအသုံးပြုပုံအချိန်မရွေး, သင့်အချက်အလက်များ၏ဆက်လက်စုဆောင်းခြင်း, အသုံးပြုခြင်းသို့မဟုတ်ထုတ်ဖော်ဘို့, သငျသညျကိုဆက်သွယ်ဘို့, သင်သည်သင်၏ခွင့်ပြုချက်ရုတ်သိမ်းစေခြင်းငှါ ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ
အပိုင်း3- ဖော်ထုတ်ခြင်း
ငါတို့သည်သင်တို့ of Service ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့သတ်မှတ်ချက်များကိုဖောက်ဖျက်လျှင်ဒါသို့မဟုတ်လုပ်ဖို့ပညတ်တရားအားဖြင့်လိုအပ်သည်ဆိုပါကကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုထုတ်ဖော်လိမ့်မည်။
အပိုင်း4- SHOPIFY
သင့်ရဲ့ဒေတာ Shopify ရဲ့ဒေတာတွေကိုသိမ်းဆည်းခြင်း, databases ကိုနှင့်အထွေထွေ Shopify လျှောက်လွှာမှတစ်ဆင့်သိမ်းဆည်းထားခြင်းဖြစ်သည်။ သူတို့ကတစ်ဦး firewall ကနောက်ကွယ်မှလုံခြုံတဲ့ server ပေါ်မှာသင့်ရဲ့ဒေတာတွေကိုသိမ်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။
သင်သည်သင်၏ဝယ်ယူဖြည့်စွက်ဖို့တိုက်ရိုက်ငွေပေးချေဂိတ်ဝေးကိုရွေးချယ်လျှင်, Shopify သင့်ရဲ့ခရက်ဒစ်ကဒ်ဒေတာသိုလှောင်ပါသည်။ ဒါဟာငွေပေးချေကတ်စက်မှုဝန်ကြီးဌာနမှာ Data လုံခြုံရေးစံ (PCI-DSS) မှတဆင့် encrypted ဖြစ်ပါတယ်။ သင်၏ဝယ်ယူမှုငွေပေးငွေယူအချက်အလက်များကိုသာနေသမျှကာလပတ်လုံးသင်၏ဝယ်ယူမှုငွေပေးငွေယူဖြည့်စွက်ရန်လိုအပ်ပါသည်အဖြစ်သိမ်းဆည်းထားသည်။ ကြောင်းပြည့်စုံပင်ဖြစ်သည်ပြီးနောက်သင်၏ဝယ်ယူမှုငွေပေးငွေယူသတင်းအချက်အလက်ဖျက်ပစ်နေပါတယ်။
ဗီဇာ, မာစတာကတ်, အမေရိကန် Express နှင့် Discover နှင့်တူကုန်အမှတ်တံဆိပ်များ၏ပူးတွဲကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုဖြစ်သော PCI လုံခြုံရေးစံနှုန်းများကောင်စီကစီမံခန့်ခွဲအဖြစ်အားလုံးကိုတိုက်ရိုက်ငွေပေးချေ gateway များ PCI-DSS နေဖြင့်သတ်မှတ်စံချိန်စံညွှန်းများလိုက်နာ။
ပိုပြီးထိုးထွင်းသိမြင်မှု, သင်သည်လည်းဤနေရာတွင်ဝန်ဆောင်မှုသို့မဟုတ်ဤနေရာတွင် Privacy ဖော်ပြချက်များ Shopify ရဲ့စည်းကမ်းချက်များကိုဖတ်ရှုဖို့လိုပေမည်။
အပိုင်း5- တတိယပါတီဝန်ဆောင်မှုများ
ယေဘုယျအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုအသုံးပြုတဲ့ Third-party ပံ့ပိုးပေးသာသူတို့ကျွန်တော်တို့ကိုပေးသည့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုလုပ်ဆောင်ခွင့်ပြုရန်လိုအပ်သောအတိုင်းအတာရန်သင့်အချက်အလက်များကိုစုဆောင်းအသုံးပြုထုတ်ဖော်လိမ့်မယ်။
သို့သော်ထိုကဲ့သို့သောငွေပေးချေမှု gateway များနှင့်အခြားပေးချေမှုငွေပေးငွေယူပရိုဆက်ဆာအဖြစ်အချို့သော Third-party ဝန်ဆောင်မှုပေး, ငါတို့သည်သင်တို့၏ဝယ်ယူ-related အရောင်းအဘို့ထိုသူတို့ထံသို့ပေးရန်လိုအပ်သည်သတင်းအချက်အလက်မှလေးစားမှုအတွက်၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်သီးသန့်တည်ရှိမှုမူဝါဒများရှိသည်။
အထူးသဖြင့်, အချို့ပံ့ပိုးပေးတည်ရှိသောသို့မဟုတ်သင်သို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကိုဖြစ်စေထက်ကွဲပြားခြားနားသောတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်မှာတည်ရှိပါတယ်ဖြစ်ကြောင်းအဆောက်အဦရှိစေခြင်းငှါသတိရပါ။ သင်တစ်ဦး Third-party service provider က၏န်ဆောင်မှုများကပါဝင်ပတ်သက်ကြောင်းငွေပေးငွေယူနှင့်အတူရှေ့ဆက်ဖို့ရွေးကောက်တင်မြှောက်လျှင်ဒါဆိုသင့်ရဲ့အချက်အလက်တွေကိုကြောင်းဝန်ဆောင်မှုပေးသို့မဟုတ်ယင်း၏အဆောက်အဦတည်ရှိသည့်အတွက်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ကို (s) ၏ဥပဒေများဘာသာရပ်ဖြစ်လာပေမည်။
သငျသညျကနေဒါတည်ရှိသည်နှင့်သင့်ငွေပေးငွေယူအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌တည်ရှိသောငွေပေးချေမှုတံခါးပေါက်များကလုပ်ငန်းများ၌လျှင်ဥပမာတစ်ခုအဖြစ်, ထိုငွေပေးငွေယူဖြည့်များတွင်အသုံးပြုသင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များကို Patriot ဒုံးအက်ဥပဒေအပါအဝင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဥပဒေပြုအောက်မှာထုတ်ဖော်ဖို့ဘာသာရပ်ဖြစ်နိုင်သည်။
သင်တို့သည်ငါတို့၏စတိုးဆိုင်အပေါ်လင့်များကို click တဲ့အခါသူတို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ site ကိုမှသင်တို့ကိုပယ်ရှင်းကိုညွှန်ကြားလိမ့်မည်။ ကျနော်တို့ကတခြားဆိုဒ်များ၏ privacy ကိုအလေ့အကျင့်များအတွက်တာဝန်မယူဖြစ်ကြပြီး၎င်းတို့၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဆိုင်ရာထုတ်ပြန်ချက်များကိုဖတ်ရှုဖို့တိုက်တွန်းပါသည်။
အပိုင်း6- လုံခြုံမှု
သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသတင်းအချက်အလက်များကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ကျနော်တို့ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများယူနှင့်ကတငျထား, ဆုံးရှုံးခဲ့ရအလွဲသုံးစား, ဝင်ရောက်, ထုတ်ဖော်, ပြောင်းလဲသို့မဟုတ်ဖျက်ဆီးခံရသည်မဟုတ်သေချာစေရန်စက်မှုလုပ်ငန်းအကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်လိုက်နာပါ။
သင်သည်သင်၏ခရက်ဒစ်ကဒ်သတင်းအချက်အလက်နှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုပေးလျှင်, သတင်းအချက်အလက် Secure Socket Layer နည်းပညာသုံးပြီး encrypt လုပ်ထားတဲ့ဖြစ်ပါတယ် (SSL ကို) နှင့်တစ်ဦး AES-256 encryption ကိုနှင့်အတူသိမ်းဆည်းထား။ အဘယ်သူမျှမအင်တာနက်ကိုကျော်ဂီယာ၏နည်းလမ်းသို့မဟုတ်အီလက်ထရောနစ်သိုလှောင်မှု 100% လုံခြုံပေမဲ့, ငါတို့ရှိသမျှသည် PCI-DSS လိုအပ်ချက်များကိုလိုက်နာရန်နှင့်အပိုဆောင်းယေဘုယျအားဖြင့်လက်ခံထားသောစက်မှုလုပ်ငန်းစံချိန်စံညွှန်းများအကောင်အထည်ဖေါ်။
ဤတွင်ကျနော်တို့အသုံးပြု cookies တွေကိုစာရင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျ cookies တွေကိုသို့မဟုတ်မ Of-မှရှောင်ဖယ်လိုပါလျှင်သင်ရွေးချယ်နိုင်အောင်ကျနော်တို့ကဒီမှာသူတို့ကိုစာရင်းပြုစုထားပါတယ်။
_session_id, ထူးခြားတဲ့လက္ခဏာသက်သေ, session, Shopify သင့်ရဲ့ session တစ်ခု (referrer တို့ရဲ့, ဆင်းသက်စာမျက်နှာ, etc) နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်တွေကိုသိမ်းထားရန်ခွင့်ပြုသည်။
လာရောက်လည်ပတ်သူအရေအတွက်ကိုမှတ်တမ်းတင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ website ကိုပံ့ပိုးပေးမယ့်ပြည်တွင်းရေး stats tracker နေဖြင့်အသုံးပြုသည်နောက်ဆုံးခရီးစဉ်မှ 30 မိနစ်များအတွက် Persistent _shopify_visit မရှိ data ကိုကျင်းပ,
_shopify_uniq, ကျင်းပမပါဒေတာ, လာမယ့်နေ့၏ညသန်းခေါင်ယံ (ထိုဧည့်သည်မှဆွေမျိုး) ကုန်ဆုံးတစ်တစ်ခုတည်းဖောက်သည်ကစတိုးဆိုင်မှလာရောက်လည်ပတ်သူအရေအတွက်ကိုမှတ်တော်မူ၏။
2 ပတ်မြဲလှည်း, ထူးခြားတဲ့လက္ခဏာသက်သေ, သင်၏လှည်းရဲ့ contents အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်သိမ်းဆည်းပေးသည်။
_secure_session_id, ထူးခြားတဲ့လက္ခဏာသက်သေ, session
ဆိုင်စကားဝှက်တစ်ခုရှိပါတယ် အကယ်. အစဉျအမွဲ storefront_digest, ထူးခြားတဲ့လက္ခဏာသက်သေ, ဤလက်ရှိဧည့်သည်ဝင်ရောက်ခွင့်ရှိပါတယ်လျှင်ဆုံးဖြတ်ရန်အသုံးပြုသည်။
အပိုင်း7- သဘောတူညီခကျြအသက်
ဒီ site ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်သင်နေထိုင်ရာသင့်ရဲ့ပြည်နယ်သို့မဟုတ်ပြည်နယ်အနည်းဆုံးအများစု၏အရွယ်ဖြစ်ကြောင်းကိုယ်စားပြု, သို့မဟုတ်သင်နေထိုင်ရာသင့်ရဲ့ပြည်နယ်သို့မဟုတ်ပြည်နယ်အများစု၏အရွယ်များမှာနှငျ့သငျကျွန်တော်တို့ကိုမဆိုခွင့်ပြုပါရန်သင်၏ခွင့်ပြုချက်ပေးပြီကြောင်း ဒီ site အသုံးပြုရန်သင်၏အသေးအဖှဲမှီခို။
အပိုင်း 8 - ဒီနည်းကိုကိုယ်ရေးမူဝါဒကိုပြောင်းလဲ
ကျနော်တို့သည့်အချိန်တွင်မဆိုဒီကိုယ်ရေးကိုယ်တာဆိုင်ရာမူဝါဒပြုပြင်မွမ်းမံရန်ပိုင်ခွင့်, ဒါကြောင့်မကြာခဏကပြန်လည်သုံးသပ်ပါ။ အပြောင်းအလဲများနှင့် ပတ်သက်. ရှင်းလင်းပြောကြားဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်သူတို့ပို့စ်အပေါ်သို့ချက်ချင်းအကျိုးသက်ရောက်ယူပါလိမ့်မယ်။ ကြှနျုပျတို့သညျဤမူဝါဒပစ္စည်းအပြောင်းအလဲများကိုလုပ်လိုလျှင်, ငါတို့သည်သင်တို့ကျနော်တို့စုဆောင်းသောအရာကိုအချက်အလက်များ၏သတိထားဖြစ်ကြောင်းဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကိုအသုံးပြုရန်ဘယ်လောက်, က updated ထားပြီးကြောင်းဤနေရာတွင်သင်ကအကြောင်းကြား, နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်အခြေအနေများရှိလျှင်, ငါတို့သုံးပါနှင့် / သို့မဟုတ်ထုတ်ဖော်လိမ့်မယ် က။
သငျသညျလိုပါလျှင်: access ကို, မှန်ကန်သောဆိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုပြင်ဆင်ရန်သို့မဟုတ် delete ငါတို့သည်သင်တို့နှင့်ပတ်သက်ရှိသည်, တိုင်ကြားချက်မှတ်ပုံတင်ရန်, ဒါမှမဟုတ်ရိုးရိုးနောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များချင် ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ